गठबन्धन टुटे पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ : शशांक कोइराला - Himali Patrika	गठबन्धन टुटे पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ : शशांक कोइराला - Himali Patrika
Himali Patrika प्रकाशित मिती - ७ फाल्गुन २०७८, शनिवार
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शशांक काइरालाले सत्ता गठबन्धन टुटे पनि एमसीसीलाई संसद्‍बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका अगाडि ‘एमसीसी त्याग्ने’ वा ‘गठबन्धन बचाउने’ दुई विकल्प
मात्रै रहेको भन्दै गठबन्धन टुटे पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताए ।
‘एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो भन्ने जुन पक्ष छ, यसको विपक्षमा पनि धेरै मान्छेहरू उभिरहेका छन् । हाम्रो अस्तित्व नै डामाडोल हुन्छ । अमेरिकी सेना यहाँ आउँछन् जस्ता धेरै कुराहरू छन् । ९ वटा मुलुकमा एमसीसी जुन चलिरहेको छ त्यसमा त कोही सेना परिचालन भएको छैन । त्यसलाई पनि आधार मानेर मलाई के लाग्छ भने एमसीसी हामीले पारित गर्नुपर्छ,’ डा कोइरालाले भने, ‘तर शेरबहादुरजीको अघि दुई उपाय छन् ।
एउटा एमसीसी पास गराउने । अर्को सत्ता नबिग्रियोस् भन्ने । यो विकल्प उहाँले नै रोज्नुपर्ने हो । उहाँले कुन रोज्नुहुन्छ ? एमसीसी पारित गर्ने हो भने गठबन्धन टुट्न सक्ने देख्छु म । गठबन्धनलाई राख्ने हो भने एमसीसी छोड्नुपर्छ । दुईमध्ये एउटा मात्रै हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । एमसीसी पारित गरौँ भन्ने मेरो सल्लाह हो । किनभने ५ सय मिलियन डलर धेरै हो । यसले ट्रान्समिसन लाइनदेखि बाटोसम्म यत्रो ठूलो अनुदान हतपत कसैले दिँदैन । यसको पछि उनीहरूको कुनै स्वार्थ छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’